कुन बैंकको सेयर किन्दा तपाईंलाई धेरै फाइदा होला? :: कमल नेपाल :: Setopati
सेयर बजार उच्च विन्दुमा पुगेको यो बेला कतिपय लगानीकर्ता पैसा कमाइन्छ भन्ने हल्लाकै भरमा लगानी गरिरहेका छन्। यतिबेला बजारको अंक धेरै माथि पुगिसकेको छ। हाल परिसूचक नेप्से २४९३ अंकमा छ। गत सोमबार बजारले २५६१ को नयाँ कीर्तिमानी बनाएको थियो।
बजार जति माथि बढ्दै जान्छ, त्यति नै कम्पनीको वित्तीय स्थिति केलाएर, सुझबुझपूर्ण रूपमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ। लगानी गरेपछि बजारको मूल्य उतार-चढावभन्दा बर्सेनि दिने लाभांशप्रति विश्वस्त हुन जरुरी छ।
कर्जा, ०७७ पुस मसान्तसम्म
कर्जा ०७६ पुस मसान्तसम्म
२ खर्ब ३२ अर्ब
१ खर्ब ६४ अर्ब
१ खर्ब ७९ अर्ब
१ खर्ब ४७ अर्ब
१ खर्ब २९ अर्ब
१ खर्ब २४ अर्ब
१ खर्ब १९ अर्ब
(हेर्नुस्, सबै बैंकको बिजनेस वृद्धिदर)
औसत नगद लाभांश
औसत सेयर बोनस
औसत कुल लाभांश
(गत वर्षको नाफाबाट सबै बैंकले दिएको लाभांशको दर हेर्न यहाँ क्लक गर्नुस्)
इपिएसमा राम्रा बैंक
पिई रेसियोमा राम्रा बैंक
निष्क्रिय कर्जा कम भएका बैंक
जगेडा कोष ठूलो भएका बैंक
१५ अर्ब ५९ करोड
१३ अर्ब ५२ करोड
१२ अर्ब १५ करोड
९ अर्ब ९८ करोड
८ अर्ब ४८ करोड
७ अर्ब ७० करोड
७ अर्ब ४१ करोड
६ अर्ब ८९ करोड
५ अर्ब ९९ करोड
५ अर्ब ७८ करोड
त्यस्तै अबका दिनमा धेरै लाभांश लिन र लामो अवधिका लागि लगानी गर्न चाहनेलाई नबिल र एनआइसी एसिया बैंक उपयुक्त देखिन्छन्। हाल बजार मूल्य बढेका कारण पिई रेसियो उच्च भएकाले मूल्य घट्न गएमा यी दुवै बैंकबाट पर्ने असर भने केही ठूलो हुन सक्नेछ।
लगानी गरेपछिको जोखिम र फाइदा दुवैको भागिदार स्वयम् लगानीकर्ता नै हुने भएकाले निर्णय तपाईंकै!
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ३, २०७७, ०३:३७:००